Fandaminana tsena :: Manohy ny asany eny amoron- dalana indray ireo mpivarotra • AoRaha
Fandaminana tsena Manohy ny asany eny amoron- dalana indray ireo mpivarotra
Nomen’ny kaominina Antananarivo renivohitra( CUA) alalana hivarotra eny amoron-dalana ireo mpivarotra. Mandram-piandry ny fahavitan’ny fotodrafitrasa vaovao no voalaza fa fe-potoana hahafahan’izy ireo manao izany, toy ny eny Analakely sy ny eny Anosibe.
Na izany aza, nanamafy ny tompon’andraikitry ny tsena ao amin’ny CUA fa tsy ny mpivarotra rehetra no afaka manararaotra an’izao fanapahan-kevitra izao.
“Na eo Analakely aza, dia misy ny toerana voarara tsy azo ivarotana, toy ny eny amin’ny araben’ny Fahaleovantena. Sady tsy haharitra io fa vonjimaika ihany satria efa an-dalana ny vahaolana natokana ho amin’izany”, hoy Randrianarisoa Rija, tale misahana ny tsena ao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra, omaly.
Nahafaly an’ireo mpivarotra kosa anefa ity fanapahan-kevitra ity. “Fifanarahana tamin’ny mpiasan’ny CUA no ahafahanay mivarotra ety. Omena lalana malalaka kosa ireo mpandeha an-tongotra. Miverina amin’ny sisin-dalana fotsiny izahay rehefa mandalo ny fiara mpanara-maso”, hoy ny sasany tamin’izy ireo.
Nanamafy ny tale misahana ny tsena eto an-drenivohitra fa: “amin’ny herinandro dia efa hivoaka ny fandaminana vaovao mikasika ny tsena”. Namerimberina kosa izy fa tsy tokony hivarotana ny arabe saingy noho ny zava-misy no amelana an’ireo mpivarotra hanao izany. Marihina fa noesorin’ireo polisy kaominaly sy ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny CUA ny trano fivarotana maromaro teny amoron-dalana teny Besarety, omaly vao maraina. Hetsika izay tafiditra ao anatin’ny fandaminana an’ireo mpivarotra eto an-drenivohitra.
Fiakaran’ny rano Mbola tandindomin-doza ireo mponina manamorona an’i Sisaony
Toetr’andro Ho betsaka ny orana eto Analamanga
Fisakafoana eny Analakely Hiverina ao anaty tsena Zaimaika ireo mpivarotra
Fahalanian’ny tahiry Manomboka mikatona tsikelikely ireo tsena fivarotana entana vita sinoa